&Lọ &lọ & Oven - China Chamber & Oven Manufacturers, Suppliers
DRK645B Uv na-eguzogide ihu igwe ụlọ
Uw na-eguzogide ihu igwe ụlọ na-eji oriọna ọkụ UV dị ka isi iyi ọkụ ma mepụta ule ihu igwe na-aga n'ihu site na ịmegharị ụzarị ọkụ na ikuku nke ultraviolet, iji nweta nsonaazụ nke ihe ọkụkụ.
DRK-GHP Electrothermal na-agbanwe agbanwe mgbe niile (Ihe ọhụrụ)
Ọ bụ incubator na-adịgide adịgide kwesịrị ekwesị maka nyocha sayensị na ngalaba mmepụta ihe dị ka ahụike na ahụ ike, ụlọ ọrụ ọgwụ, biochemistry na sayensị ugbo maka ịmị mkpụrụ nje, gbaa ụka na ule okpomọkụ oge niile.
DRK-GHP Electrothermal na-agbanwe agbanwe mgbe niile
DRK-HGZ Light incubator usoro (Ọhụrụ)
Tumadi eji maka osisi germination na seedling; cultivation nke anụ ahụ na microorganisms; irè na ule ịka nká nke ọgwụ, osisi, ihe owuwu ụlọ; oge niile na ule ọkụ maka ụmụ ahụhụ, obere anụmanụ na ebumnuche ndị ọzọ.
DRK-HQH Artificial ihu igwe ụlọ usoro (New)
Ọ bụ ngwa nyocha dị mma maka mmepụta na ngalaba nyocha sayensị dịka usoro ọmụmụ mkpụrụ ndụ ihe nketa, ọgwụ, ọrụ ugbo, oke ohia, sayensị gburugburu ebe obibi, ịkọ anụ ụlọ, na ngwaahịa mmiri.
DRK-LHS-SC temperaturenọgide na-enwe okpomọkụ na ụlọ iru mmiri
Okwesiri maka inwale ogo nke ngwaahịa dika ngwa elektrọnik, ngwa eletriki, ekwentị mkpanaaka, nkwukọrịta, mita, ugbo ala, ngwaahịa plastik, ọla, nri, kemịkalụ, ngwa ụlọ, nlekọta ahụike, ikuku, wdg.
DRK-LRH usoro ihe eji emepụta mmiri ọgwụ
Ọ bụ ngwa nyocha dị mkpa maka ụlọ ọrụ nyocha sayensị, mahadum, ngalaba mmepụta ma ọ bụ ụlọ nyocha ụlọ akwụkwọ na bayoloji, mkpụrụ ndụ ihe nketa, ọgwụ, ahụike na mgbochi ọrịa, nchedo gburugburu ebe obibi, ọrụ ugbo, oke ohia na anụ ụlọ.
DRK-6000 Series agụụ ihicha oven
The agụụ ihicha oven na-akpan mere maka ihicha okpomọkụ-enwe mmetụta ọsọ ọsọ, mfe decomposed na mfe oxidized bekee. Ọ nwere ike ịnwe ọkwa nke agụụ na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ n'oge ọrụ, ma nwee ike jupụta n'ime ya na gas na-enweghị atụ, ọkachasị maka ụfọdụ ihe nwere ihe mejupụtara.
DRK-BPG Vetikal gbawara ihicha oven usoro
Igwe ọkụ gbawara agbawa dabara maka ọtụtụ ngwaahịa ma ọ bụ akụrụngwa na akụrụngwa eletriki, akụrụngwa, akụrụngwa, igwe elektrọnik, akụrụngwa na akụrụngwa, ụgbọelu, nkwukọrịta, plastik, igwe, kemịkalụ, nri, kemịkalụ, akụrụngwa na ngwa ọrụ n'ọnọdụ ọnọdụ ọnọdụ okpomọkụ.
DRK-HGZ Light Incubator usoro
Akwa okpomọkụ Blast draya oven
1.Standard nnukwu-ihuenyo LCD ngosi, multiple tent nke data na otu ihuenyo, menu-ịke ọrụ interface, Ọ dị mfe ịghọta na-arụ ọrụ. 2.The ofufe ọsọ akara usoro na nakweere, na ifufe ọsọ nwere ike gbanwee kpamkpam dị ka dị iche iche nwere. 3. Onwe nke mepụtara ikuku duct circ
DRK-HQH Artificial ihu igwe ụlọ usoro
Enwere ike iji ya maka ịmị mkpụrụ osisi, ịmị mkpụrụ, anụ ahụ na ịkọ ihe na microbial; ahụhụ na obere anụmanụ ozuzu; Mkpebi BOD maka nyocha mmiri na ule ihu igwe maka nzube ndị ọzọ.